Olona 10 lahy ni-viole zazavavy 12 ans "Tsy azo toriana ho compilce ny police @ zao e?"
Date: 12 février 2018 - 07:30
" Satria tsy afa-nanohitra mihitsy nandritry ny fanafihana, rehefa lasa ireo jiolahy vao afaka niantso vonjy sy nampandre ny fokonolona izy mivady. Ny zandary no nahazo ny fampandrenesana kanefa nisy polisy teo amin’ny 50 metatra miala ny trano"
Re: Olona 10 lahy ni-viole zazavavy 12 ans "Tsy azo toriana ho compilce ny police @ zao e?"
Date: 12 février 2018 - 08:33
Tena mpiray tsikombakomba @reo jiolahy mihitsy ny polisy sy zandary @ zao fotoana izao.Ny "butins" dia hifampizaràna.Ry mpitandro filaminana ngezalahy ao ambony vokisan'ireo mpitondra, dia ny kely aty ambany tsy maintsy manao iay ahazoany koa dia mifampizara "butins" @ jiolahy.
Hitory mpitandro filaminana ve? Aoka itsy!Sao vao maika hidiran-doza fanindroany: ny fananan'ny tena lasa, ny zanaky ny tena voaolana, ny tena higadra!
EFA TENA TSY RARINY INTSONY E! HIDRADRADRADRA NEFA TSY MISY MIHAINO.MALAHELO ANAO AHO RAMALAGASY;
Date: 13 février 2018 - 18:05
tsy misy mihaino anao eo eee, ny any aminao aza mbola ho alainy
tena malahelo antsika malagasy tanteraka ny tenako
tena zao ve sisa niafaran'ilay firenena
Date: 13 février 2018 - 19:12
Hatrany ve ny fahavoazan'i Madagasikara ?